Kuzocaca namuhla ngekusasa lomqeqeshi obangwayo | News24
Kuzocaca namuhla ngekusasa lomqeqeshi obangwayo
Johannesburg - IBloemfontein Celtic izothola namuhla ukuthi ngabe umqeqeshi wayo omusha uLuc Eymael angadlala yini ebhentshini ngempelasonto uma sebebhekene nePolokwane City.
U-Eymael usanda kujoyina leli qembu ngemuva kokushiya iPolokwane, kodwa ubengakaze aqale ukusebenza kwiCeltic ngenxa yesimangalo esafakwa yiRise and Shine kwi-PSL.
Iphini loqeqeshi wePhunya Sele Sele uLehlohonolo Seema linethemba lokuthi lo mqeqeshi waseBelgium uzovunyelwa ukuba aqalise ukuqeqesha leli qembu ngaphambi komdlali wabo ozoba se-Old Peter Mokaba Stadium ngeSonto (15:00).
OLUNYE UDABA: Uzodlala amasonto angu-8 engadlali oweDowns
“Umqeqeshi [Eymael] ubengekho [ngesikhathi sekhefu lemidlalo yeFIFA] njengoba bekumele ahambe ayokwenza i-UEFA [Pro License],” kusho uSeema etshela iKickOff.com.
“Umqeqeshi ubuye kuleli ngeSonto futhi usehlale nathi isonto lonke kanti siyethemba ukuthi namhlanje icala lizophela futhi lizovuna thina ukuze umqeqeshi ezohlal aebhentshini emdlalweni olandelayo ozoba ngeSonnto nePolokwane City.”
“Angisazi isikhathi secala, kodwa linamuhla.”